सी चिनफिङको २० घण्टा नेपाल बसाइ : यस्तो छ तालिका | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
सी चिनफिङको २० घण्टा नेपाल बसाइ : यस्तो छ तालिका
काठमाडौं २६ असोज । चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ शनिबार दिउँसो करिब साढे ३ बजे काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्लिने छन्। विमानस्थलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति सी विमानस्थलबाट सिधै कालिमाटीस्थित सोल्टी होटल पुग्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको समय तालिका अनुसार साढे ४ बजेपछि सोल्टी होटलमा नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीसँग सीको भेटवार्ता हुनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयबाट आठ, ऊर्जा मन्त्रालयबाट तीन, गृह र शिक्षा मन्त्रालयबाट एकएक योजनामा छलफल गर्ने गरी परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू एजेन्डा तयारीमा व्यस्त छन्।
उनीहरूका अनुसार चीनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा ठूलो सहायता घोषणा गर्ने तयारी छ। केरुङ–काठमाडौं सडक स्तरोन्नतिसँगै टोखादेखि नुवाकोटको छहरे सुरुङमार्ग पनि चीनको प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालले त्यही प्राथमिकता बुझेर तयारी अघि बढाएको हो। अन्नपूर्णपोष्टबाट
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको क्षमतामाथि उठ्यो प्रश्न, विज्ञ भन्छन्-‘उहाँ यो मन्त्रालयमा फिट हुुनुभएन’ (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २५ जेठ । जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले नेपालमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दो गतिमा रहेको
संघीय सरकारले बेलैमा मापदण्ड नबनाउँदा सुदूरपश्चिमले सजाय भोग्दैः मुख्यमन्त्री भट्ट
काठमाडौं, जेठ २५। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारले देश बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउने
लकडाउन खुकुलो पार्ने पहिलो चरणको छलफल; कृषि र निर्माणसम्बन्धी उद्दोग कलकारखाना र व्यवसाय सञ्चालन प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २४ जेठ । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने कार्ययोजनाको मस्यौदालाई टुंगोमा पुर्याउने तयारीलाई गति दिएको
१३ मृतकसहित ३२३५ कोरोना भाइरसका संक्रमित को को (विवरणसहित)
काठमाडौ, २४ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरसका ३ सय २३ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
आरडिटी परिक्षणमाथि प्रश्न : विज्ञ भन्छन्–अब नगरौँ
जेठ २४, काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको आरडिटी परीक्षणको बिषयमा धेरै प्रश्नहरु उठेपनी सरकारले त्यसलाई रोक्न
कुन प्रदेशमा कति कोरोना परिक्षण ? संक्रमितको विवरण यस्तो छ
जेठ २४, काठमाण्डौ । नेपालमा अहिलेसम्म कूल २ लाख २९ हजार ९ सय १४ जनाको